विवाह भन्दा पहिला पार्टनरसँग अवश्य सोध्नुस् यी तीन प्रश्न ? – Saurahaonline.com
विवाह भन्दा पहिला पार्टनरसँग अवश्य सोध्नुस् यी तीन प्रश्न ?
चितवन ९ जेठ । तपाईं विवाह गर्नेबारे सोचिरहनु भएको छ ? यदी तपाईंले तत्काल विवाह गर्नेबारे सोच्नुभएको छ भने विवाह गर्न लागेको पार्टनरसँग खुलेर कुरा गर्नुस्, आफ्ना कुरा राख्नुस् र उनका कुरा सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नुस् । यसरी खुलस्त भएर विवाह गर्दा आगामी दिनमा तपाईंको बैवाहिक अवस्था सुखद् बन्न जान्छ